Ogaden News Agency (ONA) – Xiisad Kataagan Gobolka Binshangul & Hogaankii Nabadgaliyada oo Ladilay.
Posted by Dulmane	/ May 18, 2018
Sida warar kaanagii hore aan kusoo tabinay waxaa Gobolka Binshangul ee dhaca koonfurta Itoobiya laga daad gureeyay dad aad ubadan oo udhashay qoomiyadaha Itoobiya gaar ahaan qoomiyada Axmaarada ee woqooyiga wadanka dagta.
Sida aan lawada soconay waxaa dadka aan Gobolka Binshangul udhalanin looladhaqmay si waxshinimo ah, gaar ahaan waxay maamul kusheega Binshangul ku bartilmaameed sadeen qoomiyada Axmaarada oo kamid ah dadyowga kubadan Gobolka Binshangul.
Iyadoo xiisad xoogan ay Gobolka Binshangul kajirtay baryahan ayaa maalin nimadii shalay oo Jumce ahayd lakhaarajiyay Hogaanka Xafiiska waxa loogu yeedho nabad galiyada ee Gobolka Binshangul Ismaaciil Cabdi, kaas oo latoogtay xili uu mashquul ku ahaa daad guraynta dadka labarokiciyay.
Ismaaciil Cabdi oo ahaa hogaanka nabad galiyada ee waxa loogu yeedho Kilalka Binshangul ayaa lasheegay in uu ahaa shakhsiga kadambeeyay in dadka shacabka ah Gobolka Binshangul laga saaro, isagoo sheegay in ay Gobolka kusoo kordhiyeen amaan xumo baahsan.
Dilka Ismaaciil Cabdi ayaa mar kale xiisada baasiin kusi shubay waxayna ciidanka gaarka ah ee Binshangul qaqabteen dad shacab ah oo aad ubadan, kuwaas oo ay kusheegeen in ay kadambeeyeen dilka hogaanka nabadgaliyada ee Gobolka Binshangul Ismaaciil Cabdi.
Labadii sano ee lasoo dhaafay ayaa Gobolada ay wayaanuhu kataliyaan laga soo masaafurinayay qoomiyadaha kale waxaana dadka Gobolada laga soo caydhiyay ugu badnaa qoomiyada Tigreega oo iyadu gacanta kuhaysay dhamaan goobaha muhiimka ah ee Goboladaas.